बल प्रयोग गरेर भएपनि डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइने छ : शिक्षामन्त्री « NagarikTimes
बल प्रयोग गरेर भएपनि डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइने छ : शिक्षामन्त्री
- अप्सरा बराल/संवाददाता
२९ असार २०७५, शुक्रबार १२:४३
काठमाडौं, २९ असार : शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर भए बल प्रयोग गरेर भएपनि काठमाडौं ल्याइने बताएका छन् । उनले मेडिकल एशोसिएनको टोलीलाई जुम्ला जान आग्रह गर्दा नमानेको भन्दै दुःख समेत व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार डा.केसीले काठमाडौं नआउने अडान लिनुका साथै सरकारले केन्द्रबाट पठाएको डाक्टरहरुबाट पनि उपचार लिएका छैनन् । शुक्रबार फेरि अर्को टोली पठाउने तयारी गरिएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । डा. केसी १४ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनसनरत छन् ।
शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०७४ वितरण कार्यक्रममा पोखरेलले भने, ‘अचम्म लाग्यो, सरकारले आग्रह गरेपछि देखाउन पनि जानुपर्छ नि तर, उहाँहरु मान्नु भएन । स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्न लाग्नु भएको छ ।’ सरकार वार्ता विरोधी नभएको तर, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकासँग सम्वाद नहुने बताए ।
पहिलो प्राथमिकता उपचार भएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँका स्वास्थ्य सुचांककहरु कमजोर भएर गयो भने जबरजस्ती पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यस्तो बेला मौसमले साथ दियो भने बलपूर्वक डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने संकेत गर्दै उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई भने, ‘सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो भनेर नलेख्नुहोला ।’
प्रकाशित मिति: २९ असार २०७५, शुक्रबार १२:४३